Qalabka isqurxinta Soo-saareyaal iyo Warshad - Qalabka qurxinta Shiinaha Soosaarayaasha
Qalabka la isku qurxiyo ee DIY maaskaro wejiga codsada buraash weji silikoon jilicsan
Dulmarka Faahfaahinta Degdegga ah Goobta Asal ahaan: Zhejiang Shiinaha Magaca astaanta: OEM Nambarka Moodelka: BRS0101MK Nooca: Qalabka qurxinta Fasional Logo: Summada Gaarka ah ee Xidhmada La Aqbali karo: 1pcs / opp Midabka: Sida sawirka ama codsiga caadiga ah: Qalabka qurxinta qurxinta ee qurxinta Muuqaalka: Shaqada saaxiibtinimo ee maqaarka : Qalabka buraashka alaabta caanka ah 2018 guriga raritaanka: ASAP Keyword: burush qurxiyo silikoon Magaca Alaabta: DIY Tool Clay Codsadaha Silikoon Xirfadle Mask Burush oo leh Logo ...
Buraashka Isqurxinta Buraashka Deji Premium Synthetic Foundation Buraashka Isqurxinta Buraashka Deji isku-darka Wajiga budada ah ee isku-darka ah Concealers hadhka isha Ka Sameeya burushyada Qalabka 8 PCS
Bursalka cufan waxay ka samaysan yihiin fiilooyinka synthetic ee sare oo cufnaanta sare leh, jilicsan aad u jilicsan iyo ur ka xor ah taas oo badbaado u ah isticmaalka maqaarka xasaasiga ah.Waarta, aan daadin oo aan libdhin, aad bay u fududahay in waxyaalaha la isku qurxiyo si aan kala go 'lahayn loogu dhex daro maqaarkaaga.
Burushka concealer, burushka guduudan, burushka hadhka indhaha, burushka suniyaha, buraashka bushimaha, buraashka aasaaska, burushka koontoroolka xaglaha ah, iwm waxay ku dhowdahay buuxinta dhammaan shuruudahaaga qurxinta wajigaaga iyo indhahaaga.
Dhammaan burushyadu aad bay u jilicsan yihiin oo ay fududahay in la isku qurxiyo, oo ku habboon marwada isqurxinta iyo shakhsiyaadka leh maqaar xasaasi ah oo caadi ah mana kaa xanaajin doono.
Qalabkan 8 pcs ee burushka isqurxinta ah ayaa u muuqda mid aad u qurux badan oo moodada ah midabka ugu caansan ee quruxda badan, Waa inay lahaato ururinta qurxintaada.
Ku habboon bilawga iyo farshaxan-yaqaanka isqurxinta labadaba maaddaama kuwan ay fududahay in la isticmaalo oo ay ka sarreeyaan tayada qiimo jaban, noocyo dhammaystiran oo kuu oggolaanaya inaad ilaaliso isqurxintaada.Hadiyad ku habboon hooyada, saaxiibada dumarka ah, gabdhaha iyo gacaliyaha!
10pcs Mermaid makeup burush Isha dhig burushyada isqurxinta
Buraashyadu waxay ka samaysan yihiin naylon bristles, jilicsan laakiin aan qalafsaneyn, ma jeexjeexayaan ama ka xanaajin doonaan maqaarkaaga.Ku habboon dhammaan noocyada maqaarka, xitaa maqaarka xasaasiga ah.Qalabka burushka ah ma daadin doono, waxay tusi doontaa quruxdaada dabiiciga ah waxayna ka tagi doontaa dhamaystir aan cillad lahayn
Gacanta mermaid gaar ah, qurux badan oo quruxsan.Saxiixyadu waa kuwo aan sibiq lahayn oo ay fududahay in la hayo.Ku fiican qalliinka
fududahay in la isticmaalo oo la nadiifiyo.Waxaad ku maydhi kartaa oo ku nadiifin kartaa biyo qabow oo keliya.Buraashka isticmaalka fudud ee ku habboon kuwa bilowga ah.
Buraashka isqurxintu waxay dejisay 6pcs 3D Mermaid makeup burush isqurxin burushyada isqurxinta indho-shadow burushyada buluuga ah
BRISTLES ULTRA SOFT: Qalabkan burushka isqurxinta ah wuxuu ka samaysan yahay bristles nayloon jilicsan oo cufnaanta sare leh, aan daadin iyo ur bilaash ah, oo ay fududahay in lagu dhejiyo budada si loo abuuro muuqaal qumman.
DURABLE: Kalluunka 3D ee dhalaalaya ee mermaid qaabka dabada waxay ka samaysan yihiin walxo balaastiig ah, waara iyo sidoo kale muuqaal qurxoon.
Uruurinta: Qalabkan buraashka oo ka kooban 6 qaybood waxaa ka mid ah burushka hadhka isha, burushka suniyaha, burushka bishimaha, buraashka bushimaha, iwm, oo ku habboon codsashada, hadhaynta iyo isku dhafka alaabta.
U DHAMMAAN DHAMMAAN NOOCYADA ISKU ISKU SAMEYNKA: Qalabkan burushka isha mermaid wuxuu ku habboon yahay in la marsado dareeraha, budada ama labeenta la isku qurxiyo.Bir-jilicsan ee aadka u jilicsan ayaa ku siin doona taabasho xariir ah waxayna ka tagi doontaa dhammaystir aan cillad lahayn.
Badbaadada maqaarka xasaasiga ah: burushyada la isku qurxiyo labaduba waa sahlan yihiin in la nadiifiyo oo si degdeg ah u engejiya, ku habboon isticmaalka maalinlaha ah, isticmaalka burushyada qurxinta ayaa fududeynaya in la soo saaro qurxiyo xirfad leh.
Summada gaarka ah ee alwaax gacanta 24pcs burush isqurxin xirfad leh oo loo dejiyay burushka quruxda
Ka kooban 24 burush bristle synthetic ah oo leh gacanka bamboo
burushyada waxaa ka mid ahaa: bakhaar fidsan oo heersare ah, budada caanka ah
Hooska weyn ee Elite, saxnaanta fiiqan ee caanka ah, blender doefoot elite, taageere sare, hadh fidsan oo heersare ah, hadh qurux badan
Blender fiiqan ee Elite, blender elite, concealer elite, hadh xagal sare leh, laydh fidsan oo heersare ah, caleen sare
Faahfaahinta Elite ee fiiqan, hooska yar ee caanka ah, safka fiican ee heersare ah, safka sareeye, tafatir heersare ah oo yar, safka xagal sare leh
Habraaca Tayada Sare leh 11pcs Buraashka Isqurxinta Deji Quruxda Qalab Quruxda leh
FAA'IIDOOYINKAyaga.MURAN xirfadleyda isqurxinta burushka waxay bixisaa tayo caan ah oo qiimo jaban leh.
◆BURASH QURXOON OO LAGU QABTAY BAAKO QURUX BADAN. HADIYAD CIIDANKA KRISTA OO AAD U QURXOONA oo loogu talagalay kuwa isqurxinta jecel.
◆PREMIUM SYNTETIC HAIR,XARAAN LA'AAN.burushka qurxiyo ee MURAN ayaa ka ilaaliya xayawaan kasta inay dhaawacmaan.
◆Annagu waxaan nahay kuwo si xirfadaysan u soo saara burushyada isqurxinta muddo toban sano ah. Waxaan si fiican u naqaannaa qurxinta iyo burushka, waxay dabooli karaan baahidaada bilawga ilaa fannaaniinta isqurxinta studio.
100% DAMMAANAD LACAG AH HADDII aadan ku qanacsanayn burushkeena isqurxinta. ku qanacsanaantaadu waa yoolkeena.MURAN ayaa kula garab joogi doona mar walba.
10pcs Buraashka Indhaha Yaryar ee Tilmaame Wareegga Madaxeedka Qalabka Buraashka
1. Cusub oo tayo sare leh.
2. JACAYL iyo SILKY taabashada, burushyadu waa cufan oo si fiican ayey u qaabaysan yihiin.
3. 10pcs Kabuki Burush Set Synthetic Makeup Brush Foundation Eyeshadow Blush Concealer Buraashka budada ah waxay ku fiican tahay kuwa bilawga ah iyo xirfadlayaasha qurxinta qurxinta labadaba.
Shan nooc oo burush ah (Xagal, Wareeg, Filan, Xaglo Fiican, Tapered) ayaa bixiya xalal sahlan oo xirfad leh oo aasaaska u ah qurxinta aasaasiga ah.
Tusaale ahaan, burushka qurxinta xaglaha ah ayaa ku habboon blush iyo bronzer.Buraashka fidsan ee yar ayaa loogu talagalay daboolayaasha iyo cilladaha.
Xirfadlayaasha Jumlada 10 pcs Rose Gold Plastic Plastic Plastic Handle Blash Make up burush Gabdhaha Maalinlaha ah ee isqurxinta waxaa lagu dhejiyay kiis
Tirada burushyada qurxiyo: 10pcs/set
Qalabka gacanta: Gacan caag ah oo tayo sare leh oo leh dusha sare ee dahabka dahabka ah
Qalabka Tuubbada: Tuubbada aluminium ee xooggan
Qalabka timaha: Sare jilicsan oo jilicsan timaha nylon
Xidhmada caadiga ah: bacda UP,
Xirmada OEM: La heli karo, aqbal summada gaarka ah iyo xirmada gaarka ah.
Jumlada Gaarka ah 5Pcs Premium Safarka la qaadan karo burushka isqurxinta mini dhigay hadh isha Indiyaha isha bushimaha ka samaysan burush
100% Cusub oo tayo sare leh
Ku caday walxaha jilicsan: timaha synthetic, timaha cirifka
Maaddada ferrule caday: aluminium alloy
Qalabka gacanta caday: caag
Maaddada dhululubada caday: aluminium
Dhererka guud: 12.5cm
Dhererka timaha: 1.4cm
Dhererka tuubada: 15cm
Midabka: Pink, Black, Cyan, Purple, Gold
Xirfadlayaasha 24pcs burushyada isqurxinta waxay dejiyaan xirmada cadayga isqurxinta ee Pro oo leh kiis maqaar ah
Midabka: Pink, madow, midab alwaax, guduud, casaan, qaxwo
Dhererka burushka: Qiyaastii 7.9"
Cabirka bacda:24 * 15.5 * 5cm (laalaadhay)
Qalabka Gacanta: Qoryaha
Walxaha burushka: Fiber fibre
Mu'asasada Qurxinta Burushka Budada BB Cream Buraashka Dabacsan
burush adag oo xoogaa wareegsan
Fiber jilicsan ayaa ka dhigaya qurxintaada mid aad u qurux badan oo qurux badan
Loo isticmaalo isqurxin budo/Foundada dabacsan
Waarta oo fududahay in la isticmaalo
Isqurxin qani ah oo isqurxin ah ayaa ka sii fiican.
Naqshadaynta gacanta buraashka caleemaha, fududahay in la qabsado.
Gacan-qabsiga burushka dheemanka saddex-geesoodka ah, fududahay in la soo qaado oo la isticmaalo.
Ilaa 200,000 burush oo leh walxo adag.
Marinka burushka ka bixi maayo.
1pcs Buro Weyn Oo Buro Dahab Ah Dahab Dabiici Ah Qurxinta Quruxda Buraashka Aasaaska Aalaadaha Quruxda Quruxda
Buraashkaan oo ka samaysan walxo tayo sare leh, jilicsan, maqaarka saaxiibtinimo iyo adkaysi leh, ayaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo boodhka ciddiyaha, sidoo kale wuxuu u dhaqmaa sida buraashka aasaasiga ah, burush cad iyo wixii la mid ah.
1. Waxaa laga sameeyay walxo tayo sare leh, jilicsan oo jilicsan, maqaarka u fiican oo waara.
2. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo boodhka ciddiyaha, sidoo kale waxay u dhaqmaan sidii buraash asaasi ah, burush buluug ah iyo wixii la mid ah.
3. Gacan dheer oo qurux badan, bixi dareen gacan oo raaxo leh.
4. 5 qaab oo aad ku doorato, buuxinta baahiyahaaga kala duwan.
5. Waxay ku habboon tahay farshaxanka ciddiyaha xirfadlaha ah iyo kuwa bilawga ah labadaba.